Saturday April 21, 2018 - 21:33:59 in Wararka by Super Admin
Waxa loogu yeero Beesha caalamka ee maalgelinaysa duullaanka lagu qaadau wadanka Maali ayaa sheegtay in Jamaacada ugargaaridda islaamka ay halis ku yihiin ahdaafta duullaankii wadankaasi lagu qaaday.
Waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa walaac ballaaran ka muujinaysa weerarada sii xoogeysanaya ee ka socda wadanka Maali oo kamid ah wadamada dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
War rasmi ah oo kasoo baxaya Ergayga Q.Midoobe uqaabilsan wadanka Maali ninka lagu magacaabo Max'med Saalax Al-nadiif ayuu ku sheegay in weerarada ay fulinayaan jamaacada ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ay wiiqeen dhammaan dadaalladii ay ku doonayeen in waxa loogu yeero Dimuquraadiyadda ay ku gaarsiiyaan dhammaan gobollada Maali.
isagoo wareysi siinayay wakaalad wareed laga leeyahay wadanka Ruushka ayuu ku sheegay in bilihii lasoo dhaafay ay sare ukaceen weerarada Mujaahidiinta arrinkaas oo uu sheegay in ay halis weyn ku yihiin doorashooyin ku sheegyada lafilayo in laqabto bisha 6-aad ee sanadkaan.
Mas'uulkan u hadlay waxa loogu yeero Q.Midoobe wuxuu walaaca ugu xooggan ka muujiyay weerarada mujaahidiinta oo markii ugu horraysay gaaray Bartamaha iyo Koonfurta Maali kanasoo gudbay waqooyiga wadankaas oo aheyd meesha ugu daran ee uu ka socday siraaca Maali shantii sanadood ee lasoo dhaafay.
Sidoo kale wuxuu carabaabay in cabsidu aysan ku ekeyn Maali oo kaliya balse wadamada Burkina Faaso iyo Neyjar oo Daris la ah ay ka sheeganayaan weerarada uga imaanaya mujaahidiinta jamaacada ugargaaridda islaamka iyo Muslimiinta.
Mar uu soo hadal qaaday ciidamada ka socda Isbaheysiga Dowladaha Saaxilka ee loo yaqaan G5 ee Maali lageeyay ayuu sheegay in aysan wax weyn kusoo kordhin dhanka ammaanka balse ay wajahayaan caqabadihii ay lakulmeen ciidamada ka socda waxa loogu yeero Q.Midoobe iyo kuwa dowladda saliibiyadda Faransiiska.
Ninkan dabadhilifka ah ee lagu magacaabo Max'med Saalax alnadiif ayaa horay Ururka Midowga Afrika uqaabilsan Soomaaliya isagoo sidaan oo kale uga walwali jiray weerarada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay ku qaaddo gaalada Afrikaanta ah ee duullaanka shareeca ladirirka ah kusoo qaadday Soomaaliya.
Mareykanka oo Kooxaha Suufida Galguduud ku cadaadiyay in ay la heshiiyaan DFS.